ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကသင့် ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးသလဲ၊ သင်ဘာကြောင့်အဲဒါကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းရမလဲ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ပေါက်ခြင်း
ဘယ်လို porn စွဲသင့်ဦးနှောက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်ချက်ချင်းက fix ရမယ်
[ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်မှအဆင့်မြင့်အကျင့်။ " ဒီဆောင်းပါးကိုဆိုက်မှာခလုတ်နှိပ်ထားတာကြောင့်ဒီဆောင်းပါးကိုငါတို့ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်။ ]
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအလတ်စားမျှသံသယဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနေရာတိုင်းင်ကတဦးတည်းထွက်ပွတ်သပ်ဖို့သွေးဆောင်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ သငျသညျအပြည့်အဝအမြင့်ဆုံးနှင့်အဓိပ္ပါယ်အကြောင်းအရာမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်, အထူးသဖြင့်အခါ။
အတော်များများကအကြီးအကစွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့ဦးဆောင်အဘယ်ကြောင့်အတိအကျအကြောင်းပြချက်ခံစားရကြောင်းသဘောတူနိုင်သည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်၏။ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့အသုတသေနပွုနှင့်တစ်ကြိမ်နှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့က fix ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သည်အထိတစ်ဦး avid အင်တာနက်အသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်း, ငါ့ဦးနှောက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာယိုယွင်းဆိုးရွားခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်မသင်ယူင့်အရာဖြစ်တယ်။
ဦးနှောက်ဓာတုဗေဒမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ neurotransmitters တစ်စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ porn စွဲ၏ဆက်စပ်ခုနှစ်တွင်တာဝန်ယူကို 'ခံစား-ကောင်းသော' 'neurotransmitters နဲ့အတူ Endorphins တွေဟာ - အများစု dopamine ။ Dopamine ကဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍ, ကောင်းလှ၏။ အခြေခံအဆင့်တွင်, သင်မျိုးပွားပါဝင်သောရှင်သန်မှု၏ကြီးမြတ်သောဖြစ်နိုင်ခြေဆီသို့ဦးတည်ကြိုးပမ်းစောင့်ရှောက်သောအချို့သောလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်နိုင်ရန်အတွက်ဖြန့်ချိသည်။ ငါ့ကိုသရုပျဖျောဖို့ Allow:
အစားအစာကိုကြည့်ပါ။ - Dopamine ထုတ်ပြန်သည် -> စားရန်လှုံ့ဆော်မှု
ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီး -> Dopamine ထုတ်ပြန်သည် -> မျိုးပွားရန်လှုံ့ဆော်မှု
သင့်ရဲ့အာရုံကို (အစားအစာအနံ့ပူမိန်းကလေး, etc ၏ရူပါရုံကို) မှတဆင့်
အတွေးအသင်းအဖွဲ့များ (စသည်တို့ကိုအစားအစာ, လိင်၏အပျြောအပါးစဉ်းစား) မှတဆင့်
ဒါဟာ porn (အသိ) မှာရှာဖွေနေနှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (အတွေး) ၏အပျြောအပါးပေါင်းသင်းအသုံးပြုပုံ dopamine ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိသာဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာသင့်အကြိုက်ဆုံး porn site ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အထွတ်အထိပ်သည်အထိချွတ် wack ဖို့လှုံ့ဆျော။ ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင် (အဖြစ်ဝေးဦးနှောက်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ကဲ့သို့) ကိုအောင်မြင်စွာပွားပါပြီ။
ကံမကောင်းစွာပဲယောက်ျားဦးနှောက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏တစ်နာရီအတွင်း 30 စူပါပူသူငယ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလုံခြုံစွာ dopamine လွှတ်ပေးရန်တုံ့ပြန်ရန်ပြောင်းလဲမထားပါဘူး။ အဲဒါကိုတူသောမထင်ထားဘူးသော်လည်း, က dopamine receptors ၏ပျက်စီးမှုမှဦးဆောင်ကာ overkill ပါပဲ။ ဤသည်ကိုလည်း dopamine အလွန်အကျွံပမာဏဖြန့်ချိရာအလွန်အကျွံမူးယစ်နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူတွေ့ကြုံတတ်၏။
အခြေခံအားဖြင့် dopamine ထိရောက်သောဖြစ်ဖို့ဦးနှောက်ထဲမှာ '' receptors '' ပို့ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ receptors မထိခိုက်စေဖြန့်ချိသည့် dopamine သာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုခံစား-ကောင်းသောစေ့ဆော်ဘို့လက်ခံရရှိဆိုလိုသည်။ ဒီတော့သာမန်လှုံ့ဆော်မှုမရှိတော့သငျသညျမသွားရရန်လုံလောက် dopamine ထုတ်လုပ်, သငျသညျ ပို. ပို. လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စှဲ၏အခြေခံသည်။
သငျသညျ porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံ masturbating ခဲ့ကြပါလျှင်, အခွင့်အလမ်းတွေကို '' ပုံမှန် porn '' သင်ကတူညီတဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုမပေးပါဘူးနေကြသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သငျသညျအပျြောအပါး၏အပိုကန်ပေးရ '' fetishes '' ရှာဖွေနေရှာတွေ့လိမ့်မည်။ ဒါဟာဝေးများက dopamine အဲဒီ receptor ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရဲ့အကောင်းဆုံးသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့နိမ့်ဆုံးအပျြောအပါးခုံအဖြစ်ကောင်းစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးတစ်ဦး desensitization စေပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပျော်မွေ့သူအပေါင်းတို့သည်အခြားပုံစံများကိုသာတိုးမြှင့်တော်မူပြီးမှ။ ဒါဟာ (အလွန်အကျွံ porn စောင့်ကြည့်သူ) အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေရဲ့တိုးမြှင့်နံပါတ်များစိတ်ကျရောဂါ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏တိုးမြှင့်မှုကိစ္စမှဆက်နွယ်နေပါသည်မတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည် - ဦးနှောက်ထဲမှာကျန်းမာ dopamine receptors တစ်မရှိခြင်းမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်အားလုံးသော ။
ဟုတ်ပါတယ်, အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ အပျော်အပါးနှင့်လှုံ့ဆျောမှုခံစားရရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုလျော့ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့မူကားဖြစ်နိုင်ပါကကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အတော်လေးသည့်ဝိရောဓိ Eh? ဒါဟာချက်ချင်းရလဒ်တွေကို (အဘယ်သူမျှမ dopamine လွှတ်ပေးရန်) ကိုမွငျလြှငျ, မအားကစားခန်းမသွားနှင့်အရှင်အဘယ်သူမျှမလှုံ့ဆျောမှုထုတ်လုပ်တူ၏။ ဖြန့်ချိသော dopamine တာတောင်မှဦးနှောက်အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးမည်မဟုတ်ပါကတည်းကဤအချိန် မှလွဲ. ကြောင့်ပိုဆိုးပါတယ်။
သို့ဖြစ်. သင်မည်သို့သင့်ရဲ့ dopamine receptors ပြုပြင်လည်သလဲ?
ရိုးရှင်းတဲ့။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်။
အိုးကျနော်တို့ကစွဲလမ်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုမေ့, စောင့်ပါ။ ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုရရှိသွားတဲ့နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ dopamine သင့်ရဲ့ "ပုံမှန်" ထိုးရပ်တန့်သင့်ဦးနှောက်၏အဆင်သင့်ရှိလိမ့်မည်တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာနေ့စဉ် function ကိုအဘို့အတော်လေးမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ သင့်ရဲ့ dopamine receptors ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန်အတွက်, သင် '' သင့်ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်လိုအပ်နေ '' ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုန်းကန်မှတဆင့်ဆက်လက်ရန်ရှိသည်တာပေါ့။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုအဘယျကွောငျ့လေဖြတ်ကြောင့်သင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကပြုပြင်မဆိုအခွင့်အလမ်းချင်တယ်ဆိုရင်သင်ရမ္မက်ဆန့်ကျင်ဆက်လက်ရှိရပါမည်အဖြစ်အကွောငျးရငျးမြားစှာကျိုးကြောင်းညီညွတ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့အစားအစာတိုးတက်စေူခင်းပြုပြင်များ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်ပါ။ လူအပေါင်းတို့သည် junk အစားအစာထုတ်ပစ်ခြင်းနှင့်ဗီတာမင်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာများ, ဖြစ်နိုင်ရင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှသဘာဝဟန်ချက် restore လိမ့်မည်ဟုစင်ကြယ်သော detoxifying အစားအစာများကိုအတူကအစားထိုးလိုက်ပါ။ ပုံမှန်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူဤချီးမွမ်းနှင့်သင်ကျန်းမာပြန်လည်နာလန်ထူရန်သင့်လမ်းပေါ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းအလေ့အထများအစွန်းရောက်များမှာနှင့်သင်စဉ်းစားပါ, အဘယ်သူမျှမကိစ္စသငျသညျကွိုးစားဘယ်လောက်ခက်ခဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချုပ်တည်းနိုင်လျှင် porn က Terminatorသင်သည်သင်၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုစဉ်အတွင်းဖြတ်ပြီးလာစေခြင်းငှါညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာပုံစံအားလုံးကို, စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရှာဖွေပြီးဖျက်ပစ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ။
သငျသညျတစ်ဦးတည်းသာဦးနှောက်ရှိသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အများဆုံးအရေးပါသောအပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်မှုယူပါ။ ကြာကြာသင် dopamine အလွဲသုံးစားမှုကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ရန်သင့်ဦးနှောက်ကိုဖော်ထုတ်သည် ပို. ခက်ခဲကြောင့်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်။ သင်အမှန်တကယ်ကိုသင်ပယ်ရိုက်နှက်ဖို့တိုက်တွန်းခံစားရလာမယ့်အချိန်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်စဉ်းစားပါ။
မူရင်းဆောင်းပါး (TRIGGER သတိပေးချက်)
၁ / Paul Wright ပါရဂူဘွဲ့သည်အလွန်လေးစား ခံရ၍၊ t.co/jUScFHTQYP ကြည့်ရသည်မှာသူသည် t ဖြစ်သည်။ t.co/xBL0OSEAqv